Waa maxay sababaha keena Maskax Wareerku?
Author Topic: Waa maxay sababaha keena Maskax Wareerku? (Read 32207 times)
« on: March 12, 2008, 07:02:23 AM »
Waxa jira fikrado badan oo ku saabsan waxayaalaha sababa maskax wareerka. Dooddaan waxay qayb ka tahay mid balaaran oo ka doodaysa waxa naga dhiga dadka aan nahay; in shakhsiyadaheennu ay ka dhashaan khibradaheenna nolosha ee aan soo marnay, ama in ay ka dhashaan dhaxalkeenna wiraasiga ah, ee ay waalidiinteen noo soo gudbiyeen.
Waxa suuro gal ah in qaarkeen ay dabiiciyyan u fududdahay inuu xanuun xagga maskaxda ahi ku dhaco, kaasoo ka bilaaban kara dhacdooyin rafaad leh iyo jugo.
Arrimaha soo socda waa sababaha suuro galka ah qaarkood.
Waxay jirro maskaxeedku ku iman kartaa arrimahan midkood uun ama qaarkood oo wada jira.
Nolosha qoyska oo adag
Haddii ilmuhu soo koray isagoo dareemaya in la dayriyay, ama waalidkii ka cabsada, ama la fara xumeeyo waxay dhamaan keeni karaan nabad galyo la'aan iyo khatar uu qofku ugu jiro inuu qaado jiro maskaxeed.
Intaan sii koraynnoba, waa nalaga hor joogsadaa inaan cabbirno dareenkeenna; waxaba laga yaabaa in nala ciqaabo haddii aan xanaaqno,
qosolno ama oyno. Dareennada la cabburiyo oo aan la soo ban dhigin waxay sababi karaan cadaadis dhaawici kara caafimaadkeena maskaxeed iyo ka xagga jirkaba.
Dhacdooyin nololeed dhib baddan
Kuwani waxay noqon karaan dhacdooyin jug wayn u gaysta qofka sida saaxiib ama qaraabo dhaw oo dhinta, ama halgan waqti dheer qaata sida haddi qofku yahay dhibbanaha dulmi ama cadaadis. Baayokemistari.
Samayskeena jirkeennu waxuu raad ku leeyahay maskaxdeenna. Tusaale, haddii aan naxno waxaan soo saarnaa dheecaan la yiraado Adrenaline kasoo ku yimaada waxa loo yaqaanno jawaabta dagaallan ama carar "fight or flight". Haddii dheecaanka adrenalinta aan loo isticmaalin ficil dhaqdhaqaaq ah, maskaxdeenu waxay noqotaa mid kacsan jirkeennuna mid kakan.
Hiddo sidayaasha (Genes)
Kuwani waa habka ay waalidku ugu gudbiyaan carruurtooda calaamadaha muuqaalka ah. Waxaa suuro gal ah in hiddaheennu ay raad ku leeyihiin shakhsiyaadkeenna. Waxaa jira hiddo sidayaal sababi kara xannuunno xagga muuqaalka ah, sidaas darteed waxa jiri kara hiddo sidayaal noo nuglayn kara xanuunno maskaxeed.
Re: Waa maxay sababaha keena Maskax Wareerku?
« Reply #1 on: March 12, 2008, 02:34:44 PM »
thank u so much somalidoc for this interresting topic , it is important in la ogaado waxyabaha keena jirro maskaxeedka aad ban kugu mahadinayna
« Reply #2 on: March 13, 2008, 01:30:19 AM »
aad ayaa ugu mahadsan tahay, lakin waxaan jeclaa inaad examples bixisid at least magacyada jirooyinka uu soomaali ah aan baran lahayn !!
« Reply #3 on: March 13, 2008, 02:46:56 AM »
Samira qoraalkii ka horeeyay kan ayaa tusaale ka bixinayay noocyada madax wareerka ee halkaan ka akhriso:
Halkaan ka akhriso dhamaan qoraalada ku saabsan caafimaadka maskaxda (Kuwa qoran iyo kuwa la qori doonaba)
Views: 56943 May 22, 2009, 01:41:01 PM
Views: 57992 February 05, 2008, 07:56:57 AM
Views: 53260 September 01, 2009, 02:23:15 PM
Views: 37949 May 06, 2018, 01:17:25 PM
Views: 36717 January 22, 2019, 08:47:10 PM